तीन किसिमका हुन्छन् लगानीकर्ता - Pahilo News
जिन्दगीको कुनै पनि मोडमा, कुनै पनि गतिविधिमा आधारभूत (फन्डामेन्टल) तत्वको धेरै नै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । चाहे तपाई एउटा नयाँ वा सिकारु लगानीकर्ता नै किन हुनुहुन्न, यो कुरा महत्वपूर्ण छ कि, तपाईले आधारभूत तत्वमाथि क्रिया गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताका लागि अरु पनि जरुरी छ कि, उसले आफ्नो आधारभूत तत्वको पटकपटक अध्ययन गरोस् र कतै ऊ त्यसबाट नभड्कियोस् । आधारभूत तत्वको अर्थ मात्र समय वा व्यक्तिको अनुकूलताबाट निर्धारित हुँदैन ।
नयाँ लगानीकर्ताका लागि आधार
शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु कैयौं कारणले प्रलोभनमा आउन सक्छन् । यो प्रायजसो उनीहरुका निकटका व्यक्ति, जसले उनीसित सम्पर्क राखिरहन्छन्, को कारण वा फेरि उनीहरुको वरिपरि रहेको दबाबका कारण हुन्छ । बजारप्रति इच्छा बढ्नु र सूचनाको बढोत्तरीजस्ता विषयले यसमा भूमिका खेलेका हुन्छन् । कुनै पनि व्यक्तिका लागि यो आवश्यक छ कि, उसले ट्रेनिङ प्रक्रियाको गहन अध्ययन नगरी र त्यसलाई नबुझिकन छलाङ मारोस् । बजार सञ्चालन र सूचनाको प्रामाणिकताको सिद्धान्त हुन्छ । एक रिटेल लगानीकर्ताका लागि यो कुरा आवश्यक छैन कि, ऊ त्यस कारोबारका एक श्रेष्ठ खेलाडी बन्नका लागि सबै सिद्धान्तबारे थाहा होस् र बुझोस् । उनीहरु यस कारोबारको सूक्ष्मतापूर्वक बजारमा लगानी गरेर नै सिक्न सक्दछन् । यो पनि देख्न सकिन्छ कि, बजारमा कैयौं यस्ता विश्लेषक हुन्छन्, जो आफै लगानी गर्दैनन्, जस्तै– कहिल्यै पनि नखेल्ने क्रिकेट विश्लेषकजस्तै । सिद्धान्त अवश्य पनि हुन्छ तर अन्ततः सबै सफल इन्भेस्टर्सका लागि लगानीको निर्णय लिने आफ्नो बेग्लै नीति हुन्छ । ऊ आफ्नो नीति बनाउँछ कि, कहिले कुनै विशेष शेयर चयन गर्ने, कति लगानी गर्ने, कहिले बजारबाट बाहिर निस्कने र कसरी पोर्टफोलियो बनाउने आदिआदि ।
एकजना लगानीकर्ता आफ्नो लगानीसम्बन्धी निर्णय, जोखिम उठाउने आफ्नो क्षमताको आधारमा तय गर्दछ । लगानीकर्ता जोखिम उठाउने खालका, जोखिम नउठाउने खालका र जोखिमका विपरीत प्रतिक्रिया दिने खालका हुन सक्छन् । जोखिम उठाउने खालका लगानीकर्ता सामान्यतः धेरै जोखिमयुक्त लगानीका कम फाइदाको आशाबाट पनि सन्तुष्ट रहन सक्छ । तपाईको पोर्टफोलियो जोखिम तपाईको प्रवृत्तिको प्रतिकूल हुनु पर्दछ । होइन भने तपाई प्रायजसो आफ्नो समान मूल्य र प्रकृतिका कारण दबाबमा रहनु पर्दछ ।
यसभन्दा बाहेक केही अरु पनि चिज छन्, जस्तो कि तपाई आशावादी हुनुहुन्छ कि निराशावादी ? तपाईले लगानीको क्षेत्रमा आफ्नो प्रवृत्ति अनुकूल पाइला राख्नु आवश्यक छ, न कि बजारको प्रवृत्तिअनुसार । मुख्य कुरा के हो भने, तपाईको प्रवृत्ति शक्तिशाली आधारमा उभिएको छ । बजारमा पाइला राख्नुअघि यो कुरा आवश्यक छ कि, तपाईले त्यसबारे केही समयसम्म अध्ययन गर्नुस् । तपाई आफ्नो अनुकूल पोर्टफोलियोका चयन गर्न सक्नु हुनेछ, जो तपाईको आफ्नो शेयर गणित र जोखिम उठाउने क्षमतामा आधारित छ । केही समयसम्म त्यस पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन गर्नोस् र हेर्नोस् कि, त्यसले बजारको तुलनामा कस्तो प्रदर्शन गरिरहेको छ ? तपाईले मिति र इक्विटीमा आधारित लगानीको सही मिलावट तयार गर्नु आवश्यक छ, जस्तो तपाईले आफ्नो असल पैसासित गर्नु हुनेछ । यसभन्दा बाहेक तपाईले ती दुई पोर्टफोलियोबारे सम्झिनु जरुरी छ, जसमा रिटर्न त समान हुन्छ तर त्यसमा लिएको जोखिम भने बेग्लाबेग्लै हुन्छन् । तपाई यसबाट सम्झिन सक्नु हुन्छ कि, तपाई निरन्तर उक्त शेयरको ओभर इस्टिमेट गरिरहनुभएको छ कि अन्डर इस्टिमेट । तपाई यस कुराको विश्लेषण गर्नोस् कि, तपाई कति पटक बजारलाई पछार्न सफल रहनुभयो ? यो प्रविधि अनुभवी शेयरकर्ताले पनि अपनाउनु आवश्यक छ, ऊ स्वयम्ले आफूलाई तौलन सकोस् कि, बितेको समयमा के उनले कुनै धारणा त बनाएको थिएन ? यो पनि बजारबारे सिक्ने एउटा तरिका हो ।
टाटा सन्सका पूर्व एक्जीक्युटीब डाइरेक्टर गोपालकृष्णनले आफ्नो पुस्तक द केस अफ बोन्साई म्यानेजरमा प्रवृत्तिहरुबारे रोचक अध्ययन गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘एकजना अमेरिकी सल्लाहकार गार केलिनले आफ्नो रिसर्चमा पाए कि, नर्स, फायर फाइटर र अन्य पेशेवर, जो आफ्नो काम तलबारको धारमा टेकेर गर्दछन्, उनीहरुले निर्णय अधुरो सूचना र दबाबका आधारमा लिन्छन् । जब उनीहरु आफ्नो निर्णय लिन्छन्, उनीहरुसित कुनै पद्धतिपूर्ण वा तर्कसंगत तरिका हुँदैन, जसबाट उनीहरु सही निर्णयमा पुग्न सकोस् । उनीहरुले परिस्थितिलाई तीव्र गतिले आँकलन गर्दछन् र आफ्नो प्रवृत्ति तथा अनुभव अनुसार तीव्र गतिमय प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछन् ।’ लेखक अन्तमा लेख्दछन् कि, ‘कला र खेलका साथ व्यवस्थापनका टप पर्फरमर आफ्नो प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन्छन्, तर ऊ आफ्नो बुद्धि र विश्लेषणको दायराबाट बाहिर निस्कँदैनन् । यो तपाईको विरोध गर्ने एउटा तर्क हो । यो प्रवृत्ति वर्षौंको अनुभवको दह्रो आधारमा बन्दछ । कैयौं पटक मैले प्रबन्धकले, जब ऊ सिद्धान्त विपरीत जान चाहन्छन्, भनेको सुनेको छु कि, यो त सामान्य कुरा हो । तर सामान्य ज्ञान पनि आफू आफैमा एउटा सम्पत्ति हो ।’
तपाईले जे सुन्नुभएको छ, त्यसमा व्यवहार गर्न चाहनु हुन्छ ? तपाई प्रख्यात लगानीकर्ताको इन्भेस्टमेन्ट ढाँचालाई अनुशरण गर्न सक्नु हुन्छ । यसलाई कोअटेल इन्भेस्टिङ भनिन्छ । तर यसमा पनि जोखिम छ । यदि लगानी गर्ने प्रबन्धक तीव्र गतिले खरिद बिक्री गर्दछन् भने उसको र तपाईको निर्णयको बीचको खाली समयले तपाईको लाभलाई तहसनहस तुल्याउन सक्छ । हुन पनि सक्छ, त्यस समयसम्म बजारको गति बदलिन पनि सक्छ । अब प्रश्न उठ्दछ कि, के तपाई मात्र डायवर्सिफाइड म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न चाहनु हुन्छ ? तपाई यस्तो गर्न सक्नु हुन्छ र त्यसका लागि यो पनि जरुरी हुन्छ कि, तपाई त्यसको प्रदर्शनको ट्रयाक गर्नोस् । त्यसको प्रबन्धन अनुभवी पेशेवरद्वारा गरिन्छ । तपाईको फेरि पनि म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुप¥यो, किनकि तपाईसित सूचनाको उक्त पुलिन्दा र त्यो विश्लेषण ज्ञान हुँदैन, जुन उनीहरुसित छ । आज सूचना धेरै नै कम खर्चमा उपलब्ध हुन्छ तर यो प्रक्रियाले तपाईको समय लिन्छ ।
अनुभवी लगानीकर्ता आफ्नो अनुभवका कारण फस्न सक्दछ । ती व्यक्ति लगानीकर्ता, पोर्टफोलियो म्यानेजर, विश्लेषक वा फेरि पीई म्यानेजर हुन सक्छन् । यो कुरामा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ कि, समयका साथसाथै उनीहरु आफ्नो सोचमा एउटा धारणा विकसित गर्दछन् र एक निश्चित ढाँचा अपनाउन थाल्दछन् । उनीहरु दह्रो नीतिअन्तर्गत काम गर्दछन्, जसको आधार विश्लेषण हुन्छ । यो उनीहरुका लागि राम्रो हुनेछ कि, उनीहरु बेग्लाबेग्लै पोर्टफोलियोमा काम गरोस् र देखोस् कि कुनमाथि कस्तो दाउ लगाउन सकिन्छ । यो जरुरी छ कि, उनीहरु पटकपटक आफ्नो नीतिहरुमा फेरबदल गर्दछन् । पीटर ड्रकरले थ्योरिज अफ बिजनेसमा लेखेका छन्, ‘एउटा नीतिले जुन एक समयमा काम गर्दछ, त्यसले सधैँभरि काम गर्दैन । यस्तो पनि हुनसक्छ, त्यसले अरु काम पनि बिगारिदिन सक्छ । एउटा सफल बिजनेस फर्मुलाले लामो समयसम्म सफलताको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन ।’
(लेखक, भारतका लगानी विश्लेषक हुन्)
कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेल्डाँडी, बैवाह, झिलमिला, खैरिघाट, भुडा, कलकत्ता, बेलौरी, पुनर्वास र शंकरपुरका सयौ..